IHyperbola, ilahla iLinux futhi iba yimfoloko ye-OpenBSD | Kusuka kuLinux
IHyperbola, ilahla iLinux futhi iba yimfoloko ye-OpenBSD
I-Hyperball uhlelo olusebenzayo lokwakhiwa kwe-i686 ne-x86-64, okuyi kusekelwe ezithombeni ze-Arch nokuthuthukiswa kwe-Debian ukwandisa ukuzinza nokuphepha, kanye ifaka izinto ze-GNU kanye ne-Linux-libre kernel esikhundleni se-Linux kernel ejwayelekile. IHyperbola ibhalwe yiFree Software Foundation njengohlelo lokusebenza lwamahhala ngokuphelele, ngokuvumelana nemihlahlandlela yokusabalalisa yohlelo.
Ngokungafani ne-Arch, IHyperbola isebenzisa imodeli yokusekela yesikhathi eside njengoDebian, imodeli eguqulwe ukunweba isikhathi sokugcinwa kwesoftware futhi iguqule uhlobo nobuningi bezibuyekezo zesoftware (iziqeshana) ukunciphisa ubungozi, izindleko kanye nokuphazamiseka kokuthunyelwa kwesoftware, ukukhuthaza ukuthembeka kwesoftware.
I-Hyperball ithuthukiswa ngokomthetho we-KISS (Gcina Kuyisiphukuphuku) futhi ihlose ukuhlinzeka abasebenzisi ngemvelo elula, elula, ezinzile futhi ephephile.
Uhlelo lokuqalisa lususelwa ku-sysvinit ngokuphatheka kwentuthuko ethile evela kumaphrojekthi we-Devuan ne-Parabola. Isikhathi sokulandelela sokuqalisa yiminyaka emi-5.
I-Goodbye Linux, sawubona i-OpenBSD
Zimbalwa izinsuku ezedlule onjiniyela abaphethe iphrojekthi ngu-Hyperbola, kwaziwe izindaba lapho ufuna ukusebenzisa uhlelo lokushintsha ukusetshenziswa kwe-Linux kernel iye kuzinsiza zomsebenzisi ze-OpenBSD ngokudluliswa kwezinye izinto ezivela kwezinye izinhlelo ze-BSD, okuhlelelwe ukusabalalisa ukusatshalaliswa okusha ngaphansi kwegama HyperbolaBSD
Isizathu soguquko Isisekelo sekhodi se-OpenBSD sibizwa ngokuthi ukungagculiseki ngamathrendi entuthuko ye-Linux kernel:
La ukwamukelwa kwezindlela zobuchwepheshe zokuvikela i-copyright (DRM)di-linux kernelIsibonelo, i-kernel ifaka ukusekelwa kobuchwepheshe bokuvikela ikhophi ye-HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) yokuqukethwe komsindo nevidiyo.
Ukuthuthukiswa kwe isinyathelo sokuthuthukisa abashayeli be-Linux kernel ngolimi lweRust. I-Los Abathuthukisi be-hyperbola abajabuli ngokusebenzisa indawo yokugcina izimpahla eyodwa futhi inezinkinga ngenkululeko yokusabalalisa amaphakheji ngeRust. Ikakhulu, imigomo yokusetshenziswa kwezimpawu zokuhweba zeRust and Cargo zivimbela ukulondolozwa kwegama lephrojekthi uma kwenzeka ushintsho noma kusetshenziswa amabala (iphakethe lingasatshalaliswa ngaphansi kwegama elithi Rust and Cargo kuphela uma lihlanganiswe lisuselwa kwimibhalo yokuqala, ngaphandle kwalokho, kudingeka imvume ebhaliwe ngaphambi kwethimba leRust Core noma ukushintshwa kwegama).
Ukuthuthukisa i-Linux kernel ngaphandle kokubheka ukuphepha (I-Grsecurity ayiseyona iphrojekthi yamahhala futhi uhlelo lwe-KSPP (Kernel Self Protection Project) lumisiwe.)
Izinto eziningi zemvelo yomsebenzisi we-GNU nezinsiza zohlelo baqala ukuphoqa ukusetshenziswa kokusebenza ngokweqile, ngaphandle kokunikeza amandla okuyikhubaza ngesikhathi sokuhlanganiswa. Njengesibonelo, ukuncika okuphoqelekile kwePulseAudio kubhekiswa esikhungweni sokulawula i-gnome, iSystemD ku-GNOME, Ukugqwala kuFirefox, kanye neJava ku-gettext.
Kungakho uhlelo lokuthuthukiswa kweHyperbolaBSD, ukuguqula uhlelo lube yimfoloko egcwele ye-OpenBSD ezonwetshwa ngekhodi entsha enikezwe ngaphansi kwamalayisense we-GPLv3 ne-LGPLv3.
Ikhodi yathuthukiswa ku-OpenBSD izohlose ukufaka esikhundleni kancane kancane izingxenye I-OpenBSD ikhishwe ngaphansi kwamalayisense angahambisani ne-GPL.
Ngesikhathi yokondliwa kwegatsha leHyperbola nge-Linux-libre kernel eyakhiwe ngaphambilini izonikezwa kuze kube ngu-2022, kepha izinhlobo ezizayo zeHyperbola zizodlulela ku-kernel entsha kanye nezinto zesistimu.
Ngakho konke lokhu, abathuthukisi beHyperbola baphawule ukuthi banomsebenzi omningi okufanele bawenze, njengoba bezolahla konke obekukhona ngaphambili entuthukweni bese begxila emizamweni yabo yokwakha kabusha uhlelo kusukela ekuqaleni.
Si ufuna ukwazi kabanzi ngayo, ungabheka inothi Kulesi sixhumanisi esilandelayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » IHyperbola, ilahla iLinux futhi iba yimfoloko ye-OpenBSD
Izindaba ezithakazelisayo ngoba zisitshela ngesimo se-kernel.
Ake sibone ukuthi kugcina kanjani.
I-Yep, yize ngicabanga ukuthi akuyona i-kernel kuphela kepha futhi nokuphoqa ukuncika. Njengoba ngishilo kokunye okubonakalayo kunomoya othile wenguquko. Babheke okuningi maqondana nezwe le-BSD namanye ama-inits ukuzama ukweqa kusuka ku-systemd nakho konke lokho okubandakanya.
Njengomsebenzisi ukuphela kwephutha engilibonayo emhlabeni we-BSD wudaba lwabashayeli, ngaphandle kwalokho luphelele ngoba sebephelele. Ukube bekunokuthile okufana no-Artix kwi-BSD bengizoshintsha ngaphandle kokungabaza ngoba ngizoba koyedwa njengoba kufanele futhi yize okwamanje ngijabule kakhulu ku-Artix sengiqala ukukhathazeka ngezinye zezinto ezenziwe eminyakeni yamuva futhi angazi liva elihle iqiniso.
I-Bitwarden umphathi omuhle kakhulu we-password yomthombo ovulekile okufanele uzame
Abathuthukisi be-Gentoo bacabanga ukuthi kungenzeka izingxenye zokwakha kanambambili ze-kernel